Xiddigaha | June 2022
Dove Cameron Boyfriend: Jadwalka Xiriirka & Taariikhda Xiriirka
Dove Olivia Cameron waa atariisho iyo heesaa Mareykan ah oo door mataano ah ku ciyaartay barnaamijka riwaayadaha ee Liv iyo Maddie ee jilaayada. Waxaa lagu sharfay Abaalmarinta Emmy Award Daytime.
Charliae Heaton miyuu wali shukaansanayaa Natalia Dyer?
Natalia waa atariisho caan ah oo Mareykan ah oo caan ku ah doorkeeda taxanaha Netflix ee 'Waxyaabaha shisheeye'. 'Hannah Montana: Filimka' waxay siisay fasaxkeedii ugu horeeyay ee Clarissa Granger.
Hilaria Baldwin iyo Alec Baldwin's Net Worth?
Alec Baldwin waxa uu noqday mid ka mid ah dadka caanka ah ee caanka ka ah dunida jilitaanka isaga oo wax ku soo kordhinaya fanka madadaalada siyaabo kala duwan. Alec Baldwin waxa uu soo ururiyay liis cajiib ah oo dhibco ah oo laga helay telefishanka iyo mashaariicda filimada sannadaha oo dhan.
Waa ayo Xubinta BTS ee ugu qanisan? Xubin Kasta
BTS shaki la'aan waa kooxda ugu fiican ee K-pop ee meeraha. Kooxda kooxda ayaa sumcadiisii ​​la baabi'isay inta sanadka ka hadhsan, gaar ahaan ka dib markii la sii daayay 'Dynamite,' oo ah heestii ugu horeysay ee Ingiriisi ah.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Jenn Goicoechea, saaxiibka Usher
Jenn Goicoechea...waa tuma? Goorma ayay Usher iyo Jenn bilaabeen shukaansiga? Carruur ma leeyihiin? Muxuu qabtaa Jenn? Dhammaan su'aalahaaga halkan ayaa looga jawaabay!
Gabadha saaxiibka ah ee Charlie Puth: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xidhiidhkiisa!
Charlie Puth waa heesaa nagu soo bandhigay dhowr bilyan oo muuqaal YouTube-ka heesihiisa. Waa kuma kan haysta boqolaal kun oo raacsan
Saaxiibka Lana Rhoades: Waa ayo Mike Majlak? Wali miyay la jirtaa isaga?
Lana Rhoades waxay ku sheegtay barteeda Instagram-ka wax ka yar toddobaad ka hor in iyada iyo Mike Majlak aysan wada joogin. Inkastoo xaqiiqda ah in macluumaadka
Mia Khalifa Boyfriend: Waa ayo Robert Sandberg? Waa la furay!
Mia Khalifa ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay kala tageen Robert Sandberg, iyadoo labada lamaane ee is guursaday uu dhamaaday. Furriinka ayaa imanaya ku dhawaad ​​hal bil
Waa tuma Finn Wolfhard saaxiibtiisa? Heerka Xiriirka 2021
Finn Michael Wolfhard waa jilaa Canadian ah oo 18 jir ah. Wolfhard, oo dhashay Diisambar 23, 2002, waa laxan-yaqaan, sawir-qaade, iyo filim-qaade kaasoo
Ma Ilmo ayay Dhalaysaa? Billie Eilish uur ma leedahay? Xanta Uurka!
Billie Eilish waa heesaa Mareykan ah oo ku caan baxday masraxa magaceeda, Billie Eilish. Fanaanada ayaa taageere weyn ku leh baraha bulshada, oo leh
Waa ayo Anderson Cooper Shukaansiga? Macluumaad Dhameystiran!
Anderson Cooper waa wariye caan ah oo talefishan Mareykan ah oo ka soo jeeda agagaarka magaalada New York. Anderson, oo ku dhashay maalqabeen
Saxiib Dakota Johnson: Waa ayo Chris Martin? Heerka Xiriirka!
Dakota Johnson waa jilaa iyo moodel u dhalatay dalka Mareykanka. Da'da 10, Melanie Griffith, gabadha jilayaasha Don Johnson iyo Melanie
Saxiib Alexandra Daddario: Taariikhda Shukaansiga Wax kasta oo aan ognahay!
Alexandra Daddario waxay ahayd jilaa xirfad leh ilaa labaatan sano. Jiliddeeda ku dhawaad ​​laba darsin filim iyo barnaamijyo taleefishin ayaa kasbaday
Gabadha saaxiibka ah ee Kenny Chesney: Waa tuma Mary Nolan? Shukaansiga Nolosha La Sahamiyay!
Habeenimadii Axadda ee ina dhaaftay, Kenny Chesney iyo Kelsea Ballerini ayaa si wada jir ah ugu soo bandhigay masraxa xafladda 56-aad ee Akadeemiyada Sannadlaha ah ee Abaalmarinta Muusiga Dalka. Waxqabadka
Eminem Gabadha: Waa ayo Whitney Scott Mathers? Ma iyada Genderfluid baa?
Horaantii sanadkan, markii Eminem gabadhiisa ay ku soo baxday baraha bulshada iyada oo ah shakhsi dareere-jinsi ah, internetku wuxuu la dhacay farxad. Sida mid ka mid ah kuwa ugu
Waa ayo Ashley Benson Shukaansi? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato sanadka 2022!
Ashley Benson ayaa lala xiriiriyay qaar ka mid ah wejiyada si gaar ah loo yaqaan sannadihii la soo dhaafay; Natiijo ahaan, marka ay timaado cidda ay shukaansato, Pretty Little
Vanessa Hudgens waa atariisho caan ah oo ka soo muuqatay filimaan faneed badan oo Dugsiga Sare ah, oo ay ku jiraan kuwii ugu dambeeyay, Dugsiga Sare Musical 2. Iyadoo ay iyada
Waa Kuma Niall Horan Shukaansi? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato sanadka 2022!
Wax walba u qaad heerka xiga, miyaynu samaynaa? Markii Niall Horan iyo saaxiibkiis haweeneyda ah Amelia Woolley ay go'aansadeen inay xiriirkooda si rasmi ah uga dhigaan casaan
Waa Kuma Paul Wesley Shukaansi? Dhameystiran & Wax kasta oo aad u Baahan Tahay inaad Ogaato!
Atariishada Nina Dobrev ayaa ogaatay in noloshu ay kaga dayato fanka macnaha in iyada iyo saaxiibkeed ay ku dhameysteen shukaansi nolosha dhabta ah, si la mid ah shaashada
Tom Hiddleston: Xiddigta Loki ma guursatay? Hubi Taariikhda Shukaansiga
Loki, taxanaha soo socda ee Disney + ee uu jilayo Tom Hiddleston, ayaa dib u qiyaasi doona asalka sheekada Ilaaha sharka. Si kastaba ha ahaatee, halka majaajilada Marvel badan
daawo mareegaha fiidiyowyada youtube ee xannibmay
6 bilood amazon arday tijaabo raadin ah
sii daayo filimada tooska ah lacag la’aan
ma heshaa robux booqashooyinka goobta
maxay yihiin goobaha qulqulka bilaashka ah ee ugu fiican
filimo buuxa oo lacag la'aan ah oo qulqulka internetka ah